Ajjeechaa Haacaaluu: Mormii hawaasa Oromoo lafoo haga qilleensarraan – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAjjeechaa Haacaaluu: Mormii hawaasa Oromoo lafoo haga qilleensarraan
(bbc)–Ajjeechaan artist Haacaaluu Hundeessaa Wiixata dabre erga dhagayamee booda biyya keessaafi alaatti mormiin hedduu gaggeeffamaa turan, ammas gaggeeffamaa jiru.
Ameerikaa Kaabaarraa haga Beeyiruut, Awurooppaarraa haga Awustiraaliyaatti hawaasni daandiitti bahuun mormiisaa dhaggeessisaa jira.
Hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa magaalaa Meelbornitti argaman ammoo qopheessummaa Mana maree dubartoota Oromoofi Garee ‘Oromia is Bleeding’ jedhamaniin mormii asiin dura hin baramne gaggeessan.
Hawaasni magaalaa Melborn keessa jiranis buufata xayyaaraa tokkotti walitti qabamuun, yogguu xayyaarri ergaa: #OromoProtestsfi Justice4Hachalu jedhu qabttee wayita balaliitu daawwataniiru.
”Hayyuun keenya Haacaaluu Hundeessaa ajjeefameera. Achiin booda ammoo hoggantoota Oromoo, kan jijjiirama nagaa biyyattii keessa fiduu barbaadan, nu jalaa hidhamanii jiru,” jechuun qindeessitoota mormichaa keessaa tokko kan taate Toltuu Tufaa sababa mormii kan ittii gaggeessaniif dubbatti.
Toltuun turtii BBC waliin gooteen, sababa weerara koroonaavaayirasiif jecha namoonni walitti qabamuun gara daandiitti bahuu waan hin dandeenyeef, mormii gama kanaa akka filatan dubbatti.
”Eega nuti manaa bahuu dadhabne, samii gubbaarraa kakaafnee Haacaaluu Hundeessaa fi dhimma Oromoo amma deemaa jiru kana beeksisuuf tattaaffanne.”
”Sagalee keenya otoo hin taane sagalee uummata biyyaa dhageessisaa jirra. Nagayaa malee wanti barbaannu hin jiru,” jetti.
”Oromoon nagayaa jedhee nagaa walfuudha, nagayaa jedhee addaan baha. Kanaaf nageenya waan dhabneef callisaa hinjirru,” jechuun sabaab sagalee dhageessisaa jiraniif dubbatti.
Akka danaa asiin gadirratti mul’atutti, magaalattii keessa karoorri iddoowwan garagaraa sagalitti balali’uun ergaasaanii dabarfachuu barbaadanis, rakkoo qilleensarraa ka kahe, iddoowwan eeraman keessaa lama qofatti balaliite.
Qilleensi balaliif mijataa yeroo tahuttis irra deebiin iddoo karoorfatanitti balali’uun ergaasaanii akka dabarfatanis odeeffanneerra.
Ameerikaa Kaabaa haga Lebaanoon
Hawaasni kutaa biyyaa Mineesotaa, magaalaa Miniyaapoolis fi kanneen biroo erga ajjeechaan Haacaaluu dhagahamee walitti fufinsaan mormii isaanii dhageessifachaa jiru.
Dubbi himtuun hawaasa kanaa kan taatee fi mirga Oromoof dubbachuun kan beekamtuu Najaat Hamzaa bulchiinsa sadarkaa gadi jirurraa qabee hanga Federalaatti gaaffii isaanii dhiyeeessaa akka jiran torban dabre BBC’tti himte.
Ajjechaa Haacaaluuf haqni akka kennamu gaafachuu, dureen hawaasa Oromoo hidhaman gadhiifamuun, intarneeta ugguurame akka gadhiifamuufi mirgi saba Oromoofi saboota kaaniis haa kabajamu kan jedhu gaaffilee isaanii keessaa ijoo akka tahaniis dubbatti.
Kongirasii Ameerikaattii bakka buutuu Minisootaa kan taate Ilhaan Omaris deeggarsa hawaasa kanaaf qabdu yeroo garagaraatti ibsiteetti.
Magaalota Awuroopaa kanneen akka Landan, Firaankifart, Paariis, Siwiidin magaalaa Istookhoolmi, Amisterdaam dabalatee, akkasumas baha giddu galeessaa Lebaanonitti ajjeechaa Haacaaluufi hidhaa namoota siyaasaa Oromoorratti raawwatame hordofuun hiriirri mormii fi sagaleen bulchiinsa MM Abiy Ahimad balaaleffatu gaggeffameera.